Ebumnuche Ebumnuche nke Geometric maka Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Echiche Idebe nke Geometric maka Ụmụ agbọghọ
1. Geometric egbu egbu na ogwe aka na-eweta anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-enwe mmasị na ink nke ifuru na-acha odo odo na-acha odo odo, a na-egbu egbu egbu mmiri na ogwe aka ha; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
2. Ogbugbu Geometric na ink nke oji fatịlaịza ya mee ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja ga-ahụ ụdị egbugbere anya Geometric mara mma nke na-acha akwụkwọ ndụ ink pink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha
3. Ọrịa geometric na ogwe aka na-eme ka mmadụ na-ele anya
Ndị ikom Brown na-ahụ ọnya geometric na ogwe aka ha; ihe eji egbu egbu a na-acha odo odo na-acha anụnụ anụnụ kwekọrọ agba akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
4. Geometric egbu egbu na afo maka Women ha na-eji ejiji ink na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-eji akara ntu oyi na-eme ka ha mara mma
5. Ogbugbu Geometric maka Ụmụ nwanyị na-eji ihe onk nke ink dee ya; eme ka ha mara mma
Ndị inyom na-ahụ maka igbu egbugbere ọnụ maka ndị inyom na-eji oji na-agbanye ala. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo mma
6. Geometric egbu egbu n'apata ụkwụ enye ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, ma na-eyi obere uwe na obere mkpịsị aka ga-aga maka egbugbere ọnụ Geometric n'akụkụ ụkwụ ha ka ha mee ka ụmụ nwoke mara mma.
7. Ejiji ntanye nke odo Geometric egbu egbu n'azụ ụmụ nwanyị mee ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ ga-aga maka ink odo odo, ihe eji egbu egbu na-egbu egbu na-eme ka ha yie ihe mara mma ma mara mma
8. Ọkpụkpọ Geometric maka Ndị inyom na-eji ejiji ink na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-achọ iji egbu egbu na-egbu egbu na-acha akwụkwọ ndụ ink; nke a na-eme ka ha mara mma ma na-egbuke egbuke
9. Geometric egbu egbu na bicep na-enye anya n 'ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, ndị uwe na-eji aka ha na-akacha aka ga-aga maka igbu egbugbere ọnụ na bipụ iji mee ka ndị mmadụ mara ihe ha na-adọrọ n'agha
10. Ọrịa geometric na ogwe aka dị ala na-eweta anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ ihe nkedo ink nke agba aja aja, igbu egbu mmiri na ogwe aka ha; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
11. Ọrịa geometric na ogwe aka na-eme ka nwanyị na-ele anya
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ ọnya Geometric na ogwe aka ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
12. Ogbugbu Geometric na ogwe aka dị n'elu na agba akpụkpọ ahụ na-eweta anya dị mma
Ndị mmadụ na-achọ ụdị ejiji nchara nchara nke ọnyà Geometric na ogwe aka elu. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo ụtọ
akara ntụpọụkwụ akaNtuba ntughariegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu ebighi ebiegbu egbu osisi lotusegbu egbu diamondmma tattoosụmụnne mgbuagbụrụ eboegwu egwuegbu egbu okpudi na nwunyeọdụm ọdụmndị mmụọ oziUche obinnụnụenyi kacha mma enyienyí egbu egbuechiche egbugbuegbugbu egbugbuaka mma akaakpị akpịegbu egbuegbu egbu hennan'olu oluzodiac akara akaraazụ azụọnwa tattoosima ima mmakoi ika tattooegbu egbu mmiriudara okooko osisiarịlịka arịlịkaegbu egbu egbuna-adọ aka mmaỤdị ekpomkpaaka akaaka akaEgwu ugorip tattoosakwara obiAnkle Tattoosngwusi pusiokpueze okpuezeegbugbu maka ụmụ agbọghọndị na-egbuke egbukeGeometric Tattoosna-egbu egbumehndi imewe